China Graphite akpọrọ Manufacturer na Supplier | Yidong
Anyị na-enyere ụwa aka ito kemgbe 2012
HP Graphite electrode
Impregnated Graphite electrode
Graphite electrode nipples
Graphite ekara akụkụ
Sholọ ahịa Production
Kpọọ Nkwado + 86-13212161818
Email Nkwado yidongcarbon@163.com
Graphite crucible, mkpọ nke mere nke graphite ihe. Ihe a kpọrọ mmadụ nwere ogologo oge site n’iji ntụpọ eserese. Ndị mbụ jiri gradite eserese (eserese eserese na nke ụwa) na ụrọ, slag ma ọ bụ ájá iji jikọta ebe ndị a na-arụ ọrụ, na usoro eji arụ ụrọ ka ejiri mee mkpịsị osisi maka ịcha ọla (ọla kọpa, Iron, ígwè, wdg). Graphite crucible nwere nnukwu n'ibu ike, refractoriness, kwes conductivity, nwere ike idi otutu gbazee na ike iguzogide ozize elu okpomọkụ ngwọta. Graphite crucible nwere ike agbazere achọkarị ịna igba ígwè, igba ígwè, ọla kọpa alloy, zinc alloy, ọla kọpa solder, wdg Na mmepe nke oge a na ụlọ ọrụ, dị iche iche metal ụlọ ọrụ na-eji electric ọkụ na-agbaze dị iche iche ọla, otú ahụ nke graphite crucibles iji eke graphite dị ka a machibidoro ihe onwunwe. Otú ọ dị, ọtụtụ obere ụlọ ọrụ na-agbaze smelters na-anọgide na-eji ụdị a graphite crucible.
Kemgbe ọbịbịa nke graphite artificial na njedebe nke narị afọ nke iri na itoolu, ndị mmadụ ejirila eserese eserese na obe osisi. Mmepe na imepụta nke ịdị ọcha dị ọcha ọfụma, eserese dị elu, carbony enyo, wdg. nụchaa ọlaọcha na ọlaọcha. , Atomic ike uranium na-agbaze, semiconductor ihe silicon otu kristal, germanium otu kristal n'ichepụta, ma tinye ya n'ọrụ nyocha dị iche iche.
A na-ekekọta ogwe osisi Graphite n'ime osisi eserese eserese, nke eserese eserese nke mmadụ, ikpo ọkụ eserese nke dị elu, ikpo ọkụ carbon, na ihe ndị ọzọ dịka ihe onwunwe ha si dị. Dị ka ebumnuche ahụ si dị, a na-akpọgidekwa ihe ndị e ji ígwè mee, ihe ndị e ji ọla kọpa mee, ihe ndị e ji ọlaedo mee, na nke a na-eji eme ihe nyocha.
Mmepụta teknụzụ imepụta nke eserese eserese eserese eruola ma ọ bụ karịa akarịa nke a na-atụbata. Ulo oru di elu nke ndi ozo nwere ihe ndi a:
1. Ọdịdị dị elu nke ọkpụkpọ eserese na-eme ka ọkpụkpọ nwere nkwonkwo nrụpụta kachasị mma, yana njikwa ya dị oke mma karịa osisi ndị ọzọ a na-ebubata. ; Graphite crucible Eserese a kpọgidere.
2. Na graphite crucible nwere a pụrụ iche glaze oyi akwa na oké ịkpụzi ihe onwunwe, nke ukwuu mma corrosion-eguzogide nke ngwaahịa na prolongs ya ọrụ ndụ.
3. The graphite mmiri na graphite crucible niile eke graphite na kwes conductivity dị nnọọ mma. Mgbe ikpochasị graphite dị ọkụ, ekwesighi itinye ya na tebụl igwe oyi ozugbo iji gbochie ya ịgbawa n'ihi ngwa ngwa jụrụ.
1. Ọnụọgụ nke nkọwa nke mkpọ bụ ikike ọla kọpa (n'arọ)
2. A ghaghị idebe grati graphite n'ebe kpọrọ nkụ ma ọ bụ n'elu osisi osisi mgbe echekwara ya.
3. Jiri nlezianya jiri aka mgbe ị na-ebugharị, ọ machibidoro idebe na ịkwanye.
4. Tupu e jiri ya mee ihe, ọ dị mkpa iji mmiri ma ọ bụ ọkụ na-ehicha ya, ma jiri nwayọọ nwayọọ mụbaa okpomọkụ na 500 ° C.
5. A ga-etinye ihe mkpuchi ahụ n'okpuru elu ọnụ ọnụ ọkụ iji gbochie mkpuchi ọkụ ahụ ịpị ọnụ ọnụ nke ọkpọ ahụ.
6. dinggbakwunye ihe kwesịrị ịdabere na agbaze ego nke mkpọ. Adịkwala ọtụtụ ihe ma gbochie ikpo ọkụ ka ịpịkọta ya.
7. Ọpụpụ n’ọkụ ahụ na nkuku mkpọpu osisi kwesịrị ịdị ka ọdịdị nke ọkpụkpọ. Akụkụ dị n'etiti nke mwekota ahụ kwesịrị igbochi mkpọsa ahụ ka ọ ghara imebi n'ike.
8. Mgbe ị na-amịpụta slag a wụrụ awụ na coke na mgbidi ime na mpụga nke ikpo ahụ, pịa ya iji gbochie mmebi nke ọkpụkpọ ahụ.
9. Ebe kwesiri ekwesi ga-adi n’agbata okpukpo oku na mgbidi oku, a ga-etinye okwa a n’etiti oku.
10. Iji ihe ọkụkụ na-agba ọkụ na ihe mgbakwunye kwesịrị ekwesị ga-ebelata ọrụ ndụ nke mkpọ.
11. N’oge eji eme ihe, igbanwe okwute otu ugboro n’izu nwere ike ime ka ndụ nke ihe a kpogidere dikwa agha.
12. Gbochie ire ọkụ na-emebi corrosive si na-agba mmiri n'akụkụ akụkụ ya na ala ya.
Nke gara aga: Graphite ekara akụkụ
Osote: UHP graphite electrode
Ahịa Ahịa Dị Mfe
Onu ahia ndi ozo
Ndị na-eweta ngwa ngwa Graphite
Mpempe akwụkwọ Graphite
Graphite agbaze Crucible
Nnukwu Crucite Crucible
Obere ihe eserese
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. bụ ọkachamara graphite electrode emeputa na ekspootu kemgbe 2012.
Na mberede: India graphite electrod ...
17,06,21June 16, 2017
Bawanye ụgwọ na ezughi oke uru ...
08,06,21June 16, 2017
The global graphite electrode mkpanaka ahịa ...
04,06,21June 16, 2017
Companylọ ọrụ anyị amaliteghachila ọrụ a ...
30,03,21June 16, 2017
The graphite electrode ahịa ga-ekwusi ike ...
19,03,21June 16, 2017